မိန်းမဆိုတာကြောက်တတ်တယ်ဆိုတာ မှန်ရဲ့လား - For her Myanmar
ငယ်ငယ်ကတည်းက လူတွေ ပြောကြတဲ့ စကားတစ်ခွန်းရှိပါတယ်။ အမျိုးသမီးဆိုတာ ကြောက်တတ်တယ်တဲ့။ ဒီလိုပဲ အများပြောဆိုနေကြတော့ စိတ်ထဲမှာ အဲ့ဒီစကားက အမှန်လို့ပဲ မှတ်ယူခဲ့မိတယ်။ ကိုယ်တိုင်လည်း မိန်းကလေးဆိုတော့ ငါဟာ ကြောက်တတ်တယ် လို့ပဲ အလိုလို မှတ်ယူလိုက်တော့တယ်။
အဲ့ဒီတော့ ကြောက်စရာရှိရင် ကိုယ့်မှာ ကြောက်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ပဲ အလိုလိုခံယူလိုက်တော့တယ်။ ကြောက်တတ်တဲ့ မိန်းမတွေကို မြင်ရင်လည်း မထူးဆန်းတော့ဘူး။ သူတို့က မိန်းမပဲလေ ကြောက်ခွင့်ရှိတာပေါ့လို့ ပဲ တွေးမိတယ်။
ဒီတော့ မိန်းမတွေဟာ ကြောက်ကြပါတယ်။ ဘာတွေကိုကြောက်လဲဆို အားလုံးကိုကြောက်တာပေါ့။ လူတွေကိုကြောက်တယ်၊ ရန်ပြုခံရမှာ ကြောက်တယ်၊ လူမိုက်တွေဆို ကြောက်တယ်၊ တိရိစ္ဆာန်ဆိုးဆိုးတွေဆိုလည်း ကြောက်တယ်။ တစ်ယောက်တည်းနေရမှာ ကြောက်တယ်၊ မိသားစုအတွက် ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရမှာ ကြောက်ကြပါတယ်။
ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေကလည်း ဒီအခြေအနေတွေကို လက်ခံကြတယ်။ မိန်းမတစ်ယောက်ကြောက်နေတာမြင်ရင် ဒါပေါ့လေ၊ မိန်းကလေးပဲ ကြောက်မှာပေါ့ လို့ မှတ်ချက်ပေးကြတယ်။
ဒီတော့ မိန်းမတွေဟာ ပိုပိုကြောက်လာကြတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်က ပေးထားတဲ့ အခွင့်အရေးကိုအပြည့်အဝယူကြတယ်။
Related Article >>> ချစ်လို့ရိုက်တာလား၊ အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုလား… လားပေါင်းများစွာ…
ဒါပေမဲ့ မိန်းမတိုင်းက ကြောက်တာတော့မဟုတ်ဘူး။ မကြောက်တတ်တဲ့ မိန်းမတွေလည်း ရှိပြန်တယ်။ သူတို့ကိုကျ အားလုံးက ထူးဆန်းတယ်လို့ ထင်ပြန်ရော။
ဟယ် မိန်းမဖြစ်ပြီး သူက မကြောက်တတ်ဘူး လို့ အထူးအဆန်းဖြစ် အံ့သြကြပြန်ရော။
မိန်းမချင်းအတူတူ ဘာကြောင့် ကြောက်တတ်သူနဲ့ မကြောက်တတ်သူ ကွဲရလည်း ဆိုတာ အက်ဒ်မင်စဉ်းစားကြည့်မိတယ်။ လေ့လာကြည့်မိပါတယ်။ ဒီအခါ အခြေအနေ နှစ်မျိုးကို တွေ့ရပါတယ်။
ပထမတစ်မျိုးက အားကိုးစရာမရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတွေပါ။ သူတို့ရှေ့က ရပ်ပေးမယ့် အဖေ၊ အစ်ကို၊ လင်ယောက်ျား စတဲ့ အမျိုးသားတွေမရှိတဲ့အခါ သူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲ အားကိုးစရာ ဖြစ်လာပါတယ်။ အဲဒီလိုမှ အားမကိုးရင်လည်း သူတို့ဘဝ ရပ်တည်ဖို့မလွယ်တဲ့အခါ အလိုလိုရဲရင့်လာရတော့ပါတယ်။
နောက်တစ်မျိုးကတော့ အားကိုးစရာရှိရင်တောင် ဘယ်သူကိုမှ အားမကိုးချင်ဘဲ အလိုလို ရဲရင့် နေတဲ့ အမျိုးသမီးတွေပါ။ သူတို့ ဒီလိုဖြစ်ရတာကတော့ ဗီဇလို့ပဲခေါ်မလား၊ ငယ်စဉ်က ပျိုးထောင်ခံရတဲ့ ပုံစံကြောင့်ပဲလားဆိုတာတော့ စိတ်ပညာရှင်တွေပဲ နားလည်မယ် ထင်ပါတယ်။
ပြောရရင်တော့ ဒုတိယအမျိုးသမီးတွေဟာ ဒီနေ့ခေတ်ပုံစံအရ ရှိတော့ရှိတယ် ရှားတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုအမျိုးသမီးတွေ အားလုံးကို လေ့လာကြည့်လိုက်တဲ့အခါ မိန်းမတွေ ကြောက်တတ်တယ်ဆိုတာ သဘာဝအရဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ လူတွေရဲ့ သတ်မှတ်ချက်အရဖြစ်နေတာပါ။
မိန်းမတွေ ဘာကြောင့်ကြောက်တတ်တယ်ဆိုတာ ပြန်သုံးသပ်ကြည့်တဲ့အခါ မိန်းမဆိုတာ အားနွဲ့တယ်လေ လို့ ပြန်ဖြေကြမယ့်သူ များပါတယ်။ ဒါဟာလည်း သဘာဝနဲ့ ဆန့်ကျင်နေပါတယ်။
လူသားတွေဟာ သတ္တဝါတွေထဲမှာ ခွန်အားအနည်းဆုံးပါ။ သူ့ထက်အားနည်းတဲ့ ကြောင်၊ မျောက်၊ ယုန် ၊ သမင် စတဲ့ အကောင်တွေလိုမျိုး အပြေးမြန်တာ၊ ပေါ့ပါးသွက်လက်တာ စတဲ့ အရည်အချင်းတွေလည်း မပိုင်ဆိုင်ပါဘူး။
ဒါဆို ဘာကြောင့် လူတွေဟာ သတ္တဝါအားလုံးကို နိုင်နင်းသလဲ? သူ့ထက်အားအင်အများကြီးကြီးတဲ့ ဆင်၊ ကျား တွေကိုတောင် အနိုင်ယူနိုင်လဲ ဆိုတော့ ဉာဏ်ရည်သာလို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် မိန်းမတွေဟာ ခွန်အားနည်းလို့ကြောက်ရတယ် ဆိုတာ အဓိပ္ပာယ်လုံးဝမရှိတဲ့ အစဉ်အလာသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ ငါဟာ မိန်းမမို့ ကြောက်တတ်တယ်ဆိုတဲ့ အခွင့်အရေးကို မယူသင့်တော့ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒီအခွင့်အရေးကိုယူလိုက်လို့ ပြန်ဆုံးရှုံးရတာတွေလည်း အများကြီးပါ။
ကြောက်တတ်လို့ အားကိုးရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမှာ ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ လွတ်လပ်ခွင့်တွေအများကြီးမို့ အမှီအခိုကင်းပြီး ရဲရင့်လွတ်လပ်တဲ့ ဘဝမျိုးမှာပဲ အမျိုးသမီးတွေကို ရှင်သန်စေချင်မိပါတယ်။
ငယျငယျကတညျးက လူတှေ ပွောကွတဲ့ စကားတဈခှနျးရှိပါတယျ။ အမြိုးသမီးဆိုတာ ကွောကျတတျတယျတဲ့။ ဒီလိုပဲ အမြားပွောဆိုနကွေတော့ စိတျထဲမှာ အဲ့ဒီစကားက အမှနျလို့ပဲ မှတျယူခဲ့မိတယျ။ ကိုယျတိုငျလညျး မိနျးကလေးဆိုတော့ ငါဟာ ကွောကျတတျတယျ လို့ပဲ အလိုလို မှတျယူလိုကျတော့တယျ။
အဲ့ဒီတော့ ကွောကျစရာရှိရငျ ကိုယျ့မှာ ကွောကျပိုငျခှငျ့ရှိတယျလို့ပဲ အလိုလိုခံယူလိုကျတော့တယျ။ ကွောကျတတျတဲ့ မိနျးမတှကေို မွငျရငျလညျး မထူးဆနျးတော့ဘူး။ သူတို့က မိနျးမပဲလေ ကွောကျခှငျ့ရှိတာပေါ့လို့ ပဲ တှေးမိတယျ။
ဒီတော့ မိနျးမတှဟော ကွောကျကွပါတယျ။ ဘာတှကေိုကွောကျလဲဆို အားလုံးကိုကွောကျတာပေါ့။ လူတှကေိုကွောကျတယျ၊ ရနျပွုခံရမှာ ကွောကျတယျ၊ လူမိုကျတှဆေို ကွောကျတယျ၊ တိရိစ်ဆာနျဆိုးဆိုးတှဆေိုလညျး ကွောကျတယျ။ တဈယောကျတညျးနရေမှာ ကွောကျတယျ၊ မိသားစုအတှကျ ရငျဆိုငျဖွရှေငျးရမှာ ကွောကျကွပါတယျ။
ပတျဝနျးကငျြက လူတှကေလညျး ဒီအခွအေနတှေကေို လကျခံကွတယျ။ မိနျးမတဈယောကျကွောကျနတောမွငျရငျ ဒါပေါ့လေ၊ မိနျးကလေးပဲ ကွောကျမှာပေါ့ လို့ မှတျခကျြပေးကွတယျ။
ဒီတော့ မိနျးမတှဟော ပိုပိုကွောကျလာကွတယျ။ ပတျဝနျးကငျြက ပေးထားတဲ့ အခှငျ့အရေးကိုအပွညျ့အဝယူကွတယျ။
Related Article >>> ခဈြလို့ရိုကျတာလား၊ အိမျတှငျးအကွမျးဖကျမှုလား… လားပေါငျးမြားစှာ…
ဒါပမေဲ့ မိနျးမတိုငျးက ကွောကျတာတော့မဟုတျဘူး။ မကွောကျတတျတဲ့ မိနျးမတှလေညျး ရှိပွနျတယျ။ သူတို့ကိုကြ အားလုံးက ထူးဆနျးတယျလို့ ထငျပွနျရော။
ဟယျ မိနျးမဖွဈပွီး သူက မကွောကျတတျဘူး လို့ အထူးအဆနျးဖွဈ အံ့သွကွပွနျရော။
မိနျးမခငျြးအတူတူ ဘာကွောငျ့ ကွောကျတတျသူနဲ့ မကွောကျတတျသူ ကှဲရလညျး ဆိုတာ အကျဒျမငျစဉျးစားကွညျ့မိတယျ။ လလေ့ာကွညျ့မိပါတယျ။ ဒီအခါ အခွအေနေ နှဈမြိုးကို တှရေ့ပါတယျ။
ပထမတဈမြိုးက အားကိုးစရာမရှိတဲ့ အမြိုးသမီးတှပေါ။ သူတို့ရှကေ့ ရပျပေးမယျ့ အဖေ၊ အဈကို၊ လငျယောကျြား စတဲ့ အမြိုးသားတှမေရှိတဲ့အခါ သူတို့ကိုယျတိုငျပဲ အားကိုးစရာ ဖွဈလာပါတယျ။ အဲဒီလိုမှ အားမကိုးရငျလညျး သူတို့ဘဝ ရပျတညျဖို့မလှယျတဲ့အခါ အလိုလိုရဲရငျ့လာရတော့ပါတယျ။
နောကျတဈမြိုးကတော့ အားကိုးစရာရှိရငျတောငျ ဘယျသူကိုမှ အားမကိုးခငျြဘဲ အလိုလို ရဲရငျ့ နတေဲ့ အမြိုးသမီးတှပေါ။ သူတို့ ဒီလိုဖွဈရတာကတော့ ဗီဇလို့ပဲချေါမလား၊ ငယျစဉျက ပြိုးထောငျခံရတဲ့ ပုံစံကွောငျ့ပဲလားဆိုတာတော့ စိတျပညာရှငျတှပေဲ နားလညျမယျ ထငျပါတယျ။
ပွောရရငျတော့ ဒုတိယအမြိုးသမီးတှဟော ဒီနခေ့တျေပုံစံအရ ရှိတော့ရှိတယျ ရှားတယျလို့ ဆိုနိုငျပါတယျ။ ဒီလိုအမြိုးသမီးတှေ အားလုံးကို လလေ့ာကွညျ့လိုကျတဲ့အခါ မိနျးမတှေ ကွောကျတတျတယျဆိုတာ သဘာဝအရဖွဈတာမဟုတျပါဘူး။ လူတှရေဲ့ သတျမှတျခကျြအရဖွဈနတောပါ။
မိနျးမတှေ ဘာကွောငျ့ကွောကျတတျတယျဆိုတာ ပွနျသုံးသပျကွညျ့တဲ့အခါ မိနျးမဆိုတာ အားနှဲ့တယျလေ လို့ ပွနျဖွကွေမယျ့သူ မြားပါတယျ။ ဒါဟာလညျး သဘာဝနဲ့ ဆနျ့ကငျြနပေါတယျ။
လူသားတှဟော သတ်တဝါတှထေဲမှာ ခှနျအားအနညျးဆုံးပါ။ သူ့ထကျအားနညျးတဲ့ ကွောငျ၊ မြောကျ၊ ယုနျ ၊ သမငျ စတဲ့ အကောငျတှလေိုမြိုး အပွေးမွနျတာ၊ ပေါ့ပါးသှကျလကျတာ စတဲ့ အရညျအခငျြးတှလေညျး မပိုငျဆိုငျပါဘူး။
ဒါဆို ဘာကွောငျ့ လူတှဟော သတ်တဝါအားလုံးကို နိုငျနငျးသလဲ? သူ့ထကျအားအငျအမြားကွီးကွီးတဲ့ ဆငျ၊ ကြား တှကေိုတောငျ အနိုငျယူနိုငျလဲ ဆိုတော့ ဉာဏျရညျသာလို့ ဖွဈပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ မိနျးမတှဟော ခှနျအားနညျးလို့ကွောကျရတယျ ဆိုတာ အဓိပ်ပာယျလုံးဝမရှိတဲ့ အစဉျအလာသတျမှတျခကျြတဈခုဖွဈပါတယျ။
အမြိုးသမီးတဈယောကျအနနေဲ့ ငါဟာ မိနျးမမို့ ကွောကျတတျတယျဆိုတဲ့ အခှငျ့အရေးကို မယူသငျ့တော့ပါဘူး။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ ဒီအခှငျ့အရေးကိုယူလိုကျလို့ ပွနျဆုံးရှုံးရတာတှလေညျး အမြားကွီးပါ။
ကွောကျတတျလို့ အားကိုးရတယျဆိုတဲ့အခွအေနမှော ဆုံးရှုံးလိုကျရတဲ့ လှတျလပျခှငျ့တှအေမြားကွီးမို့ အမှီအခိုကငျးပွီး ရဲရငျ့လှတျလပျတဲ့ ဘဝမြိုးမှာပဲ အမြိုးသမီးတှကေို ရှငျသနျစခေငျြမိပါတယျ။
Tags: Bravery, equality, gender, women empowerment
Sugar Cane February 4, 2019
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများနေ့မှာ အမှတ်ရနေစရာ အာဂအမျိုးသမီး (၅) ယောက်
Stella March 8, 2019
Stella February 22, 2019
ဘတ်စ်ကားထိုင်ခုံနေရာက စတင်ခဲ့တဲ့ လူမည်းအမျိုးသမီး Rosa Parks ရဲ့ လူမည်းအခွင့်အရေးတောင်းဆိုမှု
Sugar Cane February 13, 2019